Izindlela zokwelapha zokwelapha i-mellitus yesifo sikashukela: izakhiwo eziyinkimbinkimbi zokuzivocavoca nezincomo zokusebenzisa kwazo > Ukwelashwa nokuvimbela
Izindlela zokwelapha zokwelapha i-mellitus yesifo sikashukela: izakhiwo eziyinkimbinkimbi zokuzivocavoca nezincomo zokusebenzisa kwazo
Isifo sikashukela yisifo esingelapheki se-endocrinological. Kuze kube manje, umuthi awukwazanga ukwelapha ngokuphelele le-pathology.
Ukwelashwa kwesondlo kwenziwa ngamacwecwe noma imijovo ye-insulin. Izinkinga ezijwayelekile zalesi sifo unyawo lwesifo sikashukela, i-polyneuropathy, ukwehluleka kwezinso.
Ukwehlisa amathuba ale miphumela futhi kuthuthukiswe inhlala-kahle, odokotela batusa ukwelashwa ngokomzimba ngesifo sikashukela.
Izinzuzo nezinhloso zokwelapha ngokuzivocavoca isifo sikashukela sohlobo lwe-1 no-2
Ukwelapha ukuzivocavoca noma ukwelashwa ngokomzimba kubhekwa njengengxenye ebalulekile yokwelashwa kweziguli okuxilongwa isifo sikashukela. Ukuzivocavoca nsuku zonke kuvuselela izinqubo ze-metabolic kanye nokusetshenziswa kweglucose.
Ucwaningo olwenziwe ososayensi lukhombisa ukuthi ukusebenza komzimba okwenziwe nge-dosed kusiza ukunciphisa kakhulu ukuhlahlela ushukela kufinyelela kokujwayelekile. Ngakho-ke, iziguli ezinendlela emnene ye-pathology zingala amaphilisi.
Izinzuzo zokwelapha ngokuzivocavoca kwabantu abanesimo sokuqala noma sesibili sesifo sikashukela yilezi:
ukunciphisa amafutha omzimba. Iziguli eziningi ezinenkinga ye-endocrine zikhuluphele. Isakhiwo esikhethwe kahle sikuvumela ukuthi uvumelanise i-lipid metabolism futhi ulahle amaphawundi angeziwe,
isenzo esandayo se-insulin hormone. Lokhu kwenza ukuthi sikwazi ukusebenzisa umuthi kumthamo ophansi,
kuncishiswe i-glycosuria ne-hyperglycemia. Ngenxa yalokhu, uphawu lwesifo sikashukela luye lwashiwo kancane,
ukwenza ngcono isimo semithambo yemithi nokuvimbela izinkinga ze-vascular,
umphumela onenzuzo ekusebenzeni kohlelo oluphambili lwezinzwa, oluhlupheka kakhulu kwi-endocrine pathology,
ukwenza ngcono ukusebenza komuntu, ukumelana nezinto ezingezinhle,
ukuvuselela ukwakheka kwama-endorphin athuthukisa ukuguquguquka,
ukwehla kobuthakathaka bemisipha, i-adynamia,
ukuvimbela ukuthuthukiswa kwe-hypertension, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, ukuphazamiseka kwezinso, unyawo lwesifo sikashukela.
Izinjongo eziyinhloko zokwelapha ukuvivinya ushukela:
ukuqina kwesimo sokusebenza kwengqondo,
ukukhuthaza isenzo se-insulin ohlotsheni lokuqala lwe-pathology,
ukuncishiswa kwe-hyperglycemia ngendlela yesibili yesifo,
ukubuyiselwa kokusebenza kwenhliziyo,
ukwenziwa ngcono kohlelo lokuphefumula.
Ukwelapha ukuzivocavoca kwesifo sikashukela i-mellitus akunamkhawulo weminyaka: le nkimbinkimbi ingasetshenziswa ingane, umncane noma umdala. Okuhlanganisa umzimba ukuthi kuvunyelwe ukusetshenziswa ekhaya.
Izimo eziyinkimbinkimbi zokuvivinya umzimba ngokuya ngokuqina kwesi sifo
Ochwepheshe emkhakheni we-diabetesology basungule uhlu lokuzivocavoca olulungele iziguli ezinefomu lokuqala noma lesibili le-pathology. Kunconywa izakhiwo ezahlukahlukene ngokuya ngobukhulu besifo. Ukuqeqeshwa kufanele kwenzeke ngamandla athile.
Ngokwesifo sikashukela esithambile, wonke amaqembu emisipha kufanele abambe iqhaza ngesikhathi sokuzivocavoca. Ukuhamba kwenziwa ngejubane eliphansi (eliphakathi nendawo) nge-amplitude ephezulu.
Kufanele uqale ngokuzivocavoca okulula, kancane kancane unikeze eminye eyinkimbinkimbi ngokuya ngokuxhumana. Amakilasi anconyiwe ngezifundo.
Okulandelayo kuyinkimbinkimbi ephumelelayo yesifo sikashukela:
Ukuhamba kusuka entubeni. Umhlane kufanele uqonde, futhi ukuphefumula kufanele kube ngesigqi ngokusebenzisa impumulo. Isikhathi - kusuka kumaminithi ayi-5 kuye kwayi-7,
wolula induku yokuzivocavoca phambi kwakho,
ukuhamba ngokuhlukile ezithendeni nasezinzwaneni. Izandla ngesikhathi sokunyakaza kufanele zisatshalaliswe,
emthambeka ngokugedla kwamadolo lapho ephefumula kakhulu. Uma ubuyela endaweni yokuqala, xhuma,
unamathela phansi phansi ngezinsika zamaphethelo aphansi,
ukusakaza izingalo ezinhlobonhlobo ezahlukahlukene nokwenza izinto ezijikelezayo ezinhlangothini (okokuqala kusuka kuwe, bese kuye ngokwakho). izicubu zidinga ukugxekwa ngangokunokwenzeka,
ulele esiswini sakho, ugobe umoya ojulile uguqe ngamadolo,
ukucindezela izindlebe indlebe cishe umzuzu,
ukuhamba ezolile endaweni.
Isikhathi sonke sokuqeqeshwa asisekho imizuzu engama-40. Ubunzima obungenhla kufanele benziwe nsuku zonke.
Ngokwesifo sikashukela esilinganiselwe, ukuzilolonga akufanele kuhlale imizuzu engama-30 ngejubane elilinganiselwe. Phakathi kokuzivocavoca kwamaqembu ahlukene wemisipha, udinga ukuthatha ikhefu.
ukunyakaza okujikelezayo okhalweni kwesokudla, kwesokunxele,
jika imilenze nezingalo phambili, emuva nangasohlangothini,
uhamba ibanga 2-7 km,
ukusunduza emadolweni (emuva kufanele kugcinwe kuqondile),
ufudu luphendukela kwesokunene / kwesobunxele,
enye ukuphakamisa imilenze eqondile phezulu ilele emhlane wakho,
Ukungezelela umthwalo kuvunyelwe kuphela enconyelweni kadokotela ohambelayo.
Isici sesifo sikashukela esinzima ukubakhona kokuphazamiseka kwemithambo yegazi kanye nenhliziyo. Ngakho-ke, ukuqeqeshwa kokuqala kufanele kwenzeke ngaphansi kokuqondisa kukachwepheshe. Isikhathi sesifundo asikho ngaphezu kwemizuzu eyi-10-13. Umthwalo ukukhetha ubuncane.
Ukuzivocavoca okulandelayo kuvunyelwe:
hlala phansi, imilenze ihlukane ngezindlela ezihlukile. Ithembele ku-inhale ngokuhlukile kumasokisi, ku-exhale - qondisa,
ilele phansi ukwenza "ibhayisekili" lokuzivocavoca,
hlikihla ngenduku indawo yesisu, imilenze. Ukunyakaza kufanele kwenziwe ngokuhamba kwewashi.
Okokuqala, izivivinyo zamaqembu wemisipha ephakathi nendawo nezincane ziyenziwa. Ngemuva kokuthi umzimba uguqukele ekusebenzeni ngokomzimba, kuvunyelwe ukufaka amaqembu amakhulu emisipha emsebenzini.
Okulandelayo iqoqo lokuzivocavoca elizosiza umuntu onesifo sikashukela ukukhipha amanoni omzimba okweqile:
ukuhamba njalo endaweni ngejubane elizolile,
uhamba ngezinzwani ezinqulwini eziphakeme,
ulele emhlane wakho futhi uguqe ngamadolo, phakamisa i-pelvis yakho phezulu,
torso ngezindlela ezihlukile
ukuphendukisa umzimba ngakwesokunene nangakwesobunxele,
ukucindezela phezulu kusuka phansi
ilele emhlane wakho ukuze uphakamise imilenze iqonde phezulu.
Ukudansa, i-cycling, i-gymnastics yamanzi noma ukubhukuda nakho kuzoba wusizo.
Ukuzivocavoca okwelashwa kwemilenze
Iziguli ezinesifo sikashukela zibonakala ngokuwohloka ekunikezelweni kwegazi emikhawulweni ephansi. Ngakho-ke, zivame ukunikezwa izivivinyo zokwelapha zemilenze..
ukuqinisa iminwe nokuqondisa,
gingqa kusuka esithendeni kuya ezinzwaneni kuya emuva,
iminwe ibamba izinto ezincane
ehlale ephakamisa futhi aqonde imilenze
ukudweba ngezinyawo zobukhulu
yenza ukunyakaza okujikelezayo okhalweni.
Ukuzivocavoca umzimba kwenziwa izikhathi eziyi-15.
Kunconywa ukuqeqesha ekuseni nakusihlwa.
Inkinga ejwayelekile yesifo sikashukela yi-retinopathy.
Odokotela balule ukwenze izivivinyo ezinjalo ukuqinisa uhlelo lwemisipha lwesitho sokubona:
fiphaza amehlo akho, uwavule ungafiphale,
busisa amashiya akho angaphansi nangaphezulu ngeminwe yakho,
bheka into etholakala eduzane, bese - ibanga,
vala amehlo akho imizuzu embalwa.
Ukukhokhiswa okunjalo kuzothuthukisa ukuhanjiswa kwegazi emehlweni futhi kugcinwe i-visual acuity isikhathi eside.
Ukuzivocavoca okuphefumulayo okuphefumulayo Strelnikova
Ukuzivocavoca okusebenzisekayo nokuphefumulayo kuhlelo lukaStrelnikova. Le ndlela ibuyisela ithoni ye-vascular, ithuthukisa ukuhamba kwegazi.
ume uqonde, gobisa izindololondo zakho bese uphakamisa izintende zezandla zakho. Yenza ukuphefumula okunesigqi futhi kube nemisindo emincane ngekhala, ngenkathi usula izintende zezandla zakho okhalweni,
emi, izandla zicindezelwe esiswini sakhe. Lapho uthwala umoya, yehlisa ngokuqinile izitho ezingaphezulu phansi, lapho ukhipha umoya - ubuyela esimweni sokuqala,
imi, imilenze emahlombe ububanzi bayo. Goba futhi uthathe umoya onomsindo ngekhala lakho,
uphendulela ikhanda emikhondweni ehlukene ngephimbo elinomsindo nomoya omfushane ngekhala.
I-Qigong yabanesifo sikashukela
I-Qigong inconyelwa ekwelashweni okuphelele kwesifo sikashukela. Ukuzivocavoca okuvela kule ndlela kuguqula umsebenzi wezitho zangaphakathi, ikakhulukazi, ngcono ukusebenza kwamanyikwe.
vala amehlo akho, u-inhale uphinde ukhiphe amahlandla awu-6,
imilenze ihlombe ibhlukaniswe bodwa, ingemuva eliphansi libuyiselwe emuva. Gobisa umhlane wakho, bese uqonde bese udweba ithambo lakho lomsila,
ncika phambili njengoba ukhipha futhi ukhulule izingalo zakho. Ku-inhale, qondisa bese uphakamisa izitho ezingenhla phambi kwakho. Yenza kuze kube yilapho umzimba uqala ukuncika emuva.
I-Qigong ayifanele kuphela ekwelashweni, kodwa futhi nasekuvimbeleni ukuphazamiseka kwe-endocrine.
Contraindication ekwelashweni ngokomzimba
Ukwelapha ukuzivocavoca kunezinkinga eziningi eziphikisayo:
ukuba khona kwe-acetone emchameni,
ukudangala kakhulu komzimba,
ukuguquguquka okubukhali ezingeni le-glycemia ngesikhathi sokuzivocavoca,
ushukela we-Whey ungaphezulu kwe-16.5 mmol / L.
Ubuhlungu obulinganisile emalungeni enkambweni engapheli yesifo sikashukela akuyona inkambiso. Ukwelapha ukuzivocavoca umzimba, kunalokho, kusiza ekususeni uphawu olungathandeki.
Mayelana nezinzuzo zokwelashwa kokuzivocavoca nokuzivocavoca uhlobo lukashukela 1 no-2 kule vidiyo:
Ngakho-ke, ukwelashwa okuvivinya umzimba kuvumela abanesifo sikashukela ukuba banciphise amazinga kashukela futhi kuvikele ukukhula kwezinkinga zesifo. Ukuze uzuze impumelelo, udinga ukwenza izivivinyo nsuku zonke futhi unake izincomo zikadokotela. Awukwazi ukulayisha ngokweqile umzimba nokuzivocavoca ngesikhathi sezifo ezithathelwanayo.